ပွညျမွို့နဲ့ သူနထေိုငျခဲ့တဲ့ မန်တလေးမွို့ စိနျပနျးရပျက ပိတျမိနတေဲ့ သူတှကေို ကူညီပေးဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ အလငျးရောငျ – Shwe Nay Chi
သရုပျဆောငျ မငျးသားခြောလေး အလငျးရောငျကတော့ အနု ပညာလောကမှာ နရောတဈခုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ ဖဖေျောဝါရီလ အစကတညျးက ပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ နိုငျ ငံရေးအခွအေနတှေမှောလညျး ပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တာဖွဈလို့ အရငျကထကျ ပရိသတျ အားပေးမှုတှပေိုမိုရရှိခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောလညျး အလငျးရောငျက တကျ တကျကွှကွှ ပါဝငျခဲ့တာပါ သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျ ဆိုရှယျမီဒီယာထကျမှာလညျး ယခုအခွအေနတှေနေဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ Postတှနေဲ့ ပုံတှကေိုလညျး အမြားက သိအောငျ ဝမြှေလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ မတျလ ၁၃ရကျနမှေ့ာလညျး အလငျးရောငျက သူရဲ့ Facebook Account ထကျမှာ postတဈခုတငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ ပွညျမွို့နဲ့ သူယခငျက နထေိုငျခဲ့တဲ့ မန်တလေး စိနျပနျးရပျက ဖွိုခှဲမှုတှကွေောငျ့ ပိတျမိနတေဲ့သူတှကေို ကူညီပေးဖို့ တောငျးဆိုလာတဲ့ စာသားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
အလငျးရောငျက ” ရကျစကျလိုကျကွတာဗြာ ပွညျမွို့မှာရော၊ ကြှနျတျောနခေဲ့တဲ့ မနျးလေး စိနျပနျးရပျမှာရော အားလုံး အား တငျးထားပါနျော ပိတျမိနတေဲ့သူတှေ ရှိတယျတဲ့ တတျနိုငျသ လောကျ ကူညီပေးကွပါအုနျး ခငျဗြာ ?? ” ဆိုပွီး ရေးသားကာ အကူအညီတောငျးခံလာခဲ့တာပါ။
အလငျးရောငျ ရေးသားထားတဲ့ စာသားတှကေို ပရိသတျတှထေံ ပွနျလညျဝမြှေရငျး ပွညျမွို့နဲ့ မန်တလေး စိနျပနျးရပျနားမှာ ပိတျမိနတေဲ့ သူတှကေို အကူအညီပေးဖို့ တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
ပြည်မြို့နဲ့ သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်က ပိတ်မိနေတဲ့ သူတွေကို ကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အလင်းရောင်
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး အလင်းရောင်ကတော့ အနု ပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ အစကတည်းက ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ နိုင် ငံရေးအခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အရင်ကထက် ပရိသတ် အားပေးမှုတွေပိုမိုရရှိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း အလင်းရောင်က တက် တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့တာပါ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာလည်း ယခုအခြေအနေတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Postတွေနဲ့ ပုံတွေကိုလည်း အများက သိအောင် ဝေမျှလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၃ရက်နေ့မှာလည်း အလင်းရောင်က သူရဲ့ Facebook Account ထက်မှာ postတစ်ခုတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်မြို့နဲ့ သူယခင်က နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မန္တလေး စိန်ပန်းရပ်က ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကို ကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ စာသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းရောင်က ” ရက်စက်လိုက်ကြတာဗျာ ပြည်မြို့မှာရော၊ ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ မန်းလေး စိန်ပန်းရပ်မှာရော အားလုံး အား တင်းထားပါနော် ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်တဲ့ တတ်နိုင်သ လောက် ကူညီပေးကြပါအုန်း ခင်ဗျာ ?? ” ဆိုပြီး ရေးသားကာ အကူအညီတောင်းခံလာခဲ့တာပါ။
အလင်းရောင် ရေးသားထားတဲ့ စာသားတွေကို ပရိသတ်တွေထံ ပြန်လည်ဝေမျှရင်း ပြည်မြို့နဲ့ မန္တလေး စိန်ပန်းရပ်နားမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
လူထုလှုပျရှားမှုကွီးမှာ အသကျပေးကာတိုကျပှဲဝငျသှားကွတဲ့ သူရဲကောငျးတှကေိုအလှူငှမြေား လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ခငျဝငျ့ဝါနဲ့အလငျးရောငျ